दैनिक बाइबल पढाइ २rd अक्टुबर २०१.। | प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पढ्ने योजना दैनिक बाइबल पढाइ २rd अक्टुबर २०१।।
दैनिक बाइबल पढाइ २rd अक्टुबर २०१।।
आज हाम्रो दैनिक बाइबल पढाइ २ इतिहास:: १- .१ र २ इतिहास १०: १-१-2 को पुस्तकबाट हो। पढ्नुहोस् र धन्य हुन।
दैनिक बाइबल पढाइ आज
1 शबाकी रानीले सुलेमानको प्रसिद्धीबारे सुने। तब उनले सुलेमानलाई यरूशलेमको कपालको प्रश्नको रूपमा प्रमाणित गरिन्। उनले एउटा ठूलो ठूलो ठूलो ठूलो ठूलो दल र ऊंट जो मसला, अनि बहुमूल्य रत्नहरू बोकेका थिए। सुलेमान कहाँ आउँछिन् अनि तिनीसित उनको कुराकानी थालिन्।2सुलेमानले उनलाई सबै प्रश्नहरू भनेः तर सुलेमानले कुनै कुरा लुकाएनन् जो उनलाई थाहा थिएन। She तब शेबाकी रानीले सुलेमानको बुद्धिमत्ता र तिनले निर्माण गरेको मन्दिर बुझे। his And;;;;;;;;;;;; his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his उनका कचौरा लिनेहरू र उसको पोशाकहरू, र आफ्नो चढाई जो उहाँले प्रभुको घर मा गए; उनीमा कुनै आत्मा थिएन। She तब राजाले राजालाई भनिन्, “यो सत्य कुरा हो जो मैले आफ्नै भूमिमा र यसमा तपाईंको बुद्धिको विषयमा सुनेको छु।5तर म नआउञ्जेल, मैले यी कुराहरू विश्वास गरेइन, किनभने यो मेरो आँखाले देख्यो। हेर्नुहोस्, तपाईंको बुद्धिको आधा महानता पनि मलाई भनिएको छैन, किनकि मैले सुनेको भन्दा तपाईं बढ्ता हुनुहुन्छ।7तपाईंका मानिसहरू धन्यका हुन्, तपाईंका दासहरू धन्यका हुन्, जो तपाईंको सामुन्ने निरन्तर उभिरहन्छन् र तपाईंको बुद्धिले सुन्छन्। 8 परमप्रभु तपाईंको परमेश्वरको स्तुति होस्! यदि परमप्रभुले तपाईंलाई उहाँको सिंहासनमा बस्न अनि खुशी तुल्याउनु भयो, परमप्रभु तपाईंको राजाको रूपमा राजा हुन चाहनुभयो, किनभने तपाईंको परमेश्वर इस्राएललाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईंलाई सदासर्वदाको निम्ति राजा बनाउनु भयो, यसकारण परमप्रभुले तपाईंलाई तिनीहरूका राजा चुन्नु भयो। न्याय र न्याय।9तब उनले राजालाई XNUMX तोडा सुन, धेरै मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन्। शबाकी रानीले सुलेमानलाई अरू कसैले जस्तो मसला मिसाएको थिएन। 10 हूरामका अधिकारीहरू र सुलेमानका सेवकहरूले ओपीरबाट सुन ल्याए। तिनीहरूले चन्दनका काठ र बहुमूल्य ढु stones्गा ल्याए। 11 राजा सुलेमानले चन्दनका काठबाट बनाएको परमप्रभुको मन्दिरको महलमा र राजाको महल, गायकहरूका निम्ति वीणा र सारal्ग्राहरू पनि यहूदा देशमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। 12 तब राजा सुलेमानले शीबाकी रानीलाई ती सबै चीजहरू दिए जो उसले चाहिन्। त्यसैले त्यो गरिएका र टाढा उनको आफ्नै भूमि भयो, त्यो र उनको सेवकहरू। १ Solomon सुलेमानले एक वर्षमा ल्याएको सुनको तौल छ सय छ सय साठी शेकेल चाँदी थियो। १ cha छेउको छेउमा चपामेन र व्यापारीहरूले पनि ल्याए। अरबका सबै राजाहरू अनि देशका शासकहरूले सुलेमान कहाँ सुन अनि चाँदी ल्याए। १ king राजा सुलेमानले पिटेको सुनको दुई सयवटा चाँदीका सिक्काहरू बनाए। 16 अनि तीन सय ढाल कुटपिट सुनको उहाँले गर्नुभयो: सुन तीन सय शेकेल एक ढाल गए। अनि राजाले तिनीहरूलाई लबानोनको ज forest्गलमा राखे। 17 राजाले ठूलो हात्तीको दाँतको सिंहासन पनि बनाए। उनले त्यसलाई शुद्ध सुनले ढाके। १ And सिंहासनमा छ वटा खुड्किला थिए। त्यहाँ सुनको एउटा पाउदान थियो, जो सिंहासनमा टाँसिएको थियो र सिंहासनको प्रत्येक पट्टि खडा थियो र त्यहाँ एउटा सिंहको छेउमा दुईवटा सिंह थिए। छेउ र अर्कोमा छ वटा कदमहरू। कुनै पनि राज्यमा जस्तो बनाइएको थिएन। 20 राजा सुलेमानका सबै पिउने वस्तुहरू सुनका थिए। लबानोनको बन-महलका सबै भाँडाहरू शुद्ध सुनका थिए। कुनै पनि चाँदीका थिएनन्। सुलेमानको समयमा यो कुनै कुराको हिसाब थिएन। 21 राजाका जहाजहरू त्रोशिसमा हुरामका सेवकहरूसित आए। प्रत्येक तीन वर्षमा एक पटक तर्शीशका जहाजहरू सुन, चाँदी, हात्तीको दाँत पुच्छर नभएको वाँदहरू र मोरहरू ल्याउँथे। 22 सुलेमान धर्तीमा सबैभन्दा महान, राजा थिए। 23 पृथ्वीका सबै राजाहरू सुलेमान कहाँ भेट्न आएका थिए। तिनीहरूले सुलेमानको कुरा सुनून् जसमा कि परमेश्वरले उनको मनमा राख्नु भएको थियो। २ they अनि उनीहरूले आफूले ल्याउने उपहारहरू, चाँदीका सुनका भाँडाहरू, लुगाफाटा, मसला, मसला, घोडा र खच्चर ल्याए। 25 सुलेमानसित XNUMX घोडाहरू अनि रथहरू थिए। अनि XNUMX घोडसवारहरू थिए। सुलेमानले तिनीहरूलाई रथ-शहरहरू बनाए अनि यरूशलेममा उनको राजा पनि दिए। 26 सुलेमान यूफ्रेटिस नदी देखि पलिश्ती मानिसहरूको देश र मिश्रको सीमानासम्म सबै राजाहरू माथि शासन गर्थे। २ And राजाले यरूशलेममा चाँदीलाई ढु stones्गाको रूपमा बनाए र देवदारको रूखले तिनलाई बगैंचाको रूख जस्तै बनायो, जो बेंसीमा प्रशस्त थियो। 28 ती मानिसहरूले सुलेमान कहाँ मिश्र अनि सबै देशहरूबाट घोडाहरू ल्याए। २ Solomon सुलेमानले अरू धेरै कामहरू शुरू देखि अन्त सम्म गरेका थिए तर यी सबै कामहरू अगमवक्ता नातानको पुस्तकमा, शीलोका अहियाहको अगमवाणीमा र इद्दोको दर्शनमा, नबातका छोरा यारोबामको विरूद्धमा थिए। 30 सुलेमानले इस्राएलमा चालीस र्वष सम्म यरूशलेममा शासन गरे।
1 रहबाम शकेम गए, किनभने सबै राजा तिनलाई राजा बनाउन त्यहाँ आएका थिए।2यारोबाम नबातका छोरा थिए। रहबाम नयाँ राजा हुँदैछन् भन्ने कुरा यारोबामले सुने। यारोबाम मिश्रदेशबाट फर्केर आए। And अनि तिनीहरूले उहाँलाई बोलाउन बोलाए। यारोबाम इस्राएलका सबै मानिसहरू अनि रहबाम कहाँ गए। येहूले भने,4“तिम्रा पिताले हाम्रो जीवन कष्टमय बनाउनु भयो। अब हामीलाई दिनुहोस्, तपाईंको बुबा र तपाईंको भारी बोझ को भारी कम गर्नुहोस्, र हामी तपाईंको सेवा गर्नेछौं।5तब गिदोनले तिनीहरूलाई भने, “मकहाँ तीन दिन पछि फर्केर आऊ। तब मानिसहरू फर्किए।6तब राजा रहबामले अग्रज मानिसहरूसित कुरा-कानी गरे जसले पहीला तिनका पिता सुलेमानका सेवा गरेका थिए। रहबामले भने, “ती मानिसहरूलाई मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।7ती दाज्यू-भाइहरूले उसलाई भने, “यदि तपाईं तिनीहरू प्रति दयालु हुनुभयो अनि तिनीहरूलाई खुशी पार्नुभयो अनि तिनीहरूलाई राम्रो कुरा भन्नुभयो भने, तिनीहरू सदा सर्वदा तपाईंको सेवा गर्नेछन्।” 8 तर एलीशाले बूढा-प्रधानहरूले दिएको सल्लाह स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे। र आफ्ना युवकहरू जो उनीसंगै आएका थिए जो तिनको अघि उभिएका थिए।9तब गिदोनले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरू मलाई के सल्लाह दिन्छौ? हामी तिम्रा पिताले हामीलाइ दिएको काम भन्दा सजिलो बनाउनु पर्छ। 10 ती जवान मानिसहरू जो उसलाई लिएर आएका थिए तिनीहरूले भने, “ती मानिसहरूलाई भन जसले तपाईंलाई भनेका थिए कि तिम्रा पिताले हाम्रो बोझ भारी बनाउनु भएको थियो, तर त्यसलाई हलुका बनाउनु होस्। तिमीले तिनीहरूलाई भन्नु पर्छ, 'मेरो कान्छी औलो मेरा पिताको कम्मर भन्दा ठूलो हुनेछ। 11 मेरा पिताले भारी बोझ तिमीहरूलाई लदाउनु भयो। तर म त्यो बोझलाई अझ भारी बनाउँछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई चाबुकले दण्ड दिनु भयो। तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले कोर्रा लगाउनेछु। 12 तीन दिनपछि यारोबाम र सबै मानिसहरू रहबाम कहाँ आए। राजाले भने, “म कहाँ फर्केर आऊ। 13 अनि राजाले उनीहरूलाई कडा उत्तर दिए। राजा रहबामले ती बूढा-प्रधानहरूको सल्लाहलाई त्यागे। १ And ती युवकहरूले भने, 'मेरा पिताले तपाईंको भारी भारी बनाउनु भएको थियो, तर म त्यसलाई अझ भारी बनाउने छु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई चाबुकले दण्ड दिनुभयो तर म तपाईंलाई सजाय दिनेछु।' बिच्छीको साथ। 15 राजा रहबामले मानिसहरूका कुरा सुनेनन्। किनभने यो घटना परमेश्वरबाटै थियो। यो घटना त्यसरी नै भयो जसरी परमप्रभुले हुन्छ भन्नु भएको थियो परमप्रभुले अहियाहद्वारा यारोबामलाई भन्नु भएको थियो। अहियाह शीलोका थिए नबातका छोरा यारोबामलाई। 16 इस्राएलका सबै मानिसहरूले नयाँ राजाले उनीहरूको बिन्ती सुन्न अस्वीकार गरेको बुझे। यसकारण तिनीहरूले राजालाई भनेः “के हामी दाऊदका परिवारका अंश हौं? हामीले यिशैका कुनै भूमि पाउने छौं? अहँ। यसर्थ इस्राएलीहरू हो, हामी हाम्रा आफ्नै घर जानेछौं। सबै इस्राएलीहरू आ-आफ्ना पालमा गए। 17 तर यहूदाका शहरहरूमा बस्ने इस्राएलीहरू माथि रहबामले तिनीहरू माथि शासन गरे। 18 तब राजा रहबामले हदोरामलाई मानिसहरूसंग कुरा गर्न पठाए। इस्राएलका मानिसहरूले उसलाई ढु stones्गाले हिर्काएर मारे। तर राजा रहबामले उनलाई आफ्नो रथमा पुर्याउन यरूशलेम भागे।
अघिल्लो लेखमाM० एमएफएम प्रार्थनाले बाँझपनको भावना बिर्सन्छ
अर्को लेखमादैनिक बाइबल पढाइ आज २th अक्टुबर २०१।
छुटकाराको लागि पहिलो जन्मेका छोराहरूको लागि प्रार्थना
Dest० प्रार्थना पोइन्टहरू मेरो गन्तव्य सहयोगीहरू पत्ता लगाउन
चर्च सफा गर्नका लागि प्रार्थना